मेरो कारण कुनै काम अड्केको छैन : मञ्जु भण्डारी [अन्तर्वार्ता]
मञ्जु भण्डारी | २०७६ जेठ १६ बिहीबार | Thursday, May 30, 2019 १५:२०:०० मा प्रकाशित
लाहुरेले बनाएको सहरको उपमा पाएको प्रदेश १ को धरान धार्मिक क्षेत्रले घेरिएको सुन्दर नगरी हो। व्यवस्थित बसोबास रहेको हिसाबमा पनि धरानले आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ। तर, त्यही धरान उपमहानगरले पहिलो पटक बनेको स्थानीय तहको मेयर गुमाउनुपर्‍यो। मधुमेह रोगबाट पीडित मेयर तारा सुब्बाको २०७५ साउन १ गते निधन भएपछि हाल उपमेयरकै भरमा उपमहानगरको सम्पूर्ण नेतृत्व चलिरहेको छ। खासमा धरानको अबको पहिचान र एउटै व्यक्तिबाट उपमहानगरको नेतृत्व कति सम्भव छ भन्नेबारे धरान उपमहानगपालिकाकी कार्यबाहक मेयर मञ्जु भण्डारीसँग नेपाल लाइभका विनय बाह्रकोटीले गरेको कुराकानी:
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागिसक्यो। चालु आवको बजेट कार्यनयनको अवस्था कस्तो हुँदैछ?
हामीले जुन तरिकाले सोचेका थियौं, त्यो हिसाबमा कार्यन्वयन भइरहेको छैन। तर पनि धेरै काम चालु रहेकाले अहिले नै निराश हुने अवस्था भने छैन। खर्च गर्ने समय केही बाँकी छ र खर्च पनि सोचेजस्तै होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। राजस्व संकलन र विकास खर्चमा अपेक्षा अनुसारको काम नभएको हुनुपर्छ। यो आर्थिक वर्षमा धेरै कुरा सिकियो। आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई सच्याएर लैजान्छौं।
प्राय: स्थानीय तहका जनता जनप्रतिनिधिप्रति निराश छन्। धरानमा पनि त्यही अवस्था छ। खास समस्या के हो?
यो स्वाभाविक हो। जनताका आशा र अपेक्षा असीमित भए। तर स्रोत र साधन भने सीमित रह्यो। जनताले हामीसँग गरेका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकै हो। त्यो हामी स्विकार्छौं। अघि पनि मैले भनेँ, यो आर्थिक वर्षमा गरेको अनुभवलाई लिएर आगामी आर्थिक वर्षमा सच्याउँछौं। अहिले विशेषगरी जनतालाई विकासको फर्म्याट दिने काम गरिरहेका छौं। एक करोडभन्दा माथिका गौरवका योजना नगरको मातहतमा राखेर काम गरिरहेका छौं। ५० लाखभन्दा माथि एक करोडभन्दा कमका योजनालाई जनताको तहबाटै काम गर्नेगरी योजना छनोट गरिरहेका छौं। अहिले भएन भनेर निराश हुनेभन्दा अब हुन्छ भनेर आशावादी हुने समय आएको छ।
तपाईं एक्लैले मेयर/उपमेयरको दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ। कार्यसम्पादनमा कतिको सकस छ?
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख/उपप्रमुख दुवैको नेतृत्वमा स्थानीय तह सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ। एकल नेतृत्वको नगर्नु नै भनेको हो। जहाँसम्म धरानको कुरा छ। मेयर साब पहिलेदेखि नै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला पनि मैले कार्यबाहकको भूमिकामा उपमहानगर चलाएकै हो। जब उहाँ बित्नुभयो त्यसपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो काँधमा आयो। न्यायिक समितिदेखी, अनुगमनसम्म र विभिन्न निर्णयदेखि कार्यन्यनको तहसम्म आफै सहभागी भएको छु। समय व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ भए पनि तात्विक रुपमा मलाई गाह्रो भएको छैन। कुनै पनि काम मेरो कारण अड्केको र ढिला भएको छैन।
सर्वप्रथम त धरानलाई उपमहानगरको हैसियतमा पुर्‍याउनु नै हो। सबै धराने जनतालाई उपमहानगर भएको महसुस गराउनुछ। उपहानगरको हैसियतमा पुग्नेभन्दा हाम्रो ध्यान अन्यतिर डाइभर्ट भइरहेको छ।
धरानलाई पूर्व लाहुरेको सहर भनेर चिनिन्छ। खास धरानको पहिचान यत्ति नै हो कि थप पहिचान खोज्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ?
धरान पूर्व लाहुरेको सहर त हुँदै हो। अब यसको पहिचान यतिमै मात्र सीमित हुँदैन। धरान एक समृद्ध र पर्यटकीय नगर हुनेछ। त्यसका लागि केही काम गर्न जरुरी छ। त्यो हामी गर्छौं। यहाँको धार्मिक, शैक्षिक र ऐतिहासिक पक्षलाई समेटेर नै धरानको पहिचान स्थापित हुन्छ। आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यस विषयलाई हामी समेट्छौ। धरानले केही वर्षमै नयाँ पहिचान स्थापित गर्छ।
त्यो कसरी सम्भव छ?
सम्भव छ। धरानले अब पूर्वमा पर्यटनमा नेतृत्व गर्छ। हामीले त्यसका लागि मास्टर प्लान बनाउने काम अगाडि बढाएका छौं। अहिलेसम्मका कामहरु योजनाबद्ध रुपमा भएनन्। तर अब हामी योजनाबबद्ध ढंगले काम गर्ने सोचमा छौं। अन्य स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएका छौं। बुढासुब्बादेखि बराहक्षेत्र र रामधुनीसम्मको धार्मिक सर्किट बनाइन्छ। यसले कम्तीमा पनि ८ वटा महत्वपूर्ण धार्मिक सम्पदा परिचित गराउँछ। जसबाट आन्तरिक मात्र होइन छिमेकी देश भारतका पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्न सकिन्छ। भारतबाट आएका पर्यटकलाई महाभारत भ्रमण गराउने, प्याराग्लाइडिङदेखि र्‍याफ्टिङ गराउने प्याकेज बनाएर यसको पहिचान स्थापित गराउन सकिने आधारहरु तयार पारेका छौं।
त्यो सबै गर्न उपमहानगर सक्षम भइसकेको छ त?
छ। केही बाँकी छ। तर त्यो बाँकी काम पहिला गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामी गर्दैछौं।
बाँकी काम भन्नाले?
सर्वप्रथम त धरानलाई उपमहानगरको हैसियतमा पुर्‍याउनु नै हो। सबै धराने जनतालाई उपमहानगर भएको महसुस गराउनुछ। उपहानगरको हैसियतमा पुग्नेभन्दा हाम्रो ध्यान अन्यतिर डाइभर्ट भइरहेको छ। उपमहानगर हुनका लागि केही इन्डिकेटरहरु छन्। अब त्यसको लागि केही काम गर्नुपर्छ। जस्तो: सिटीहल, व्यवस्थित बजार, व्यवस्थित बधशाला बनाउने, बसपार्क, युवा उद्यमशीलता, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोनन्ति, खानेपानीको व्यवस्थापन जस्ता कामहरु हुन सकेका छैनन्। जुन अब हुन्छन्।